Ngwurugwu phishing nke Gmail na-aghọgbu ọbụna ndị ahịa mara ọkwa nke ọma Ọ BỤ
Ntugharị nke Gmail a na-eme ka ọ bụrụ nke na-aghọgbu ndị ahịa: Nke a bụ ihe nzuzo iji ghọta ya
Ndi nyocha nchekwa na WordFence bu onye ama ama nke ihe nchedo amawo ihe ha na-acho bu ihe ojoo nke na-eme ka ndi Gmail Gmail jiri aka n'inyocha ihe ndi ozo. E kwuwo na ojoro ahụ na-ebuwanye ibu banyere ndị ahịa nke nchịkọta ozi email ma na-agụnye ọnyà dị mfe nke na ọbụna anya ndị a kwadebere ga-eche na o siri ike ịhụ akwụkwọ. Mgbe ịmata nke a ojoro, WordFence ekwuputala otu ihe na blog ha ma dọọ aka ná ntị banyere mwakpo ahụ.
Olee otú ọ na
Ihe ojoo ojoo bu ihe ndi mara mma. Ndị na-emefu ego ma ọ bụ ndị ahịa Gmail ga-ebu ụzọ nweta ozi email site na onye ahịa ahụ na-ahụ ka a kpọtụrụ ya na kọntaktị. Ejiri email ahụ bụ ihe nwere ihe niile ngebichi nke ịbụ ihe ndekọ ọkọlọtọ na .pdf imewe. Ndị ahịa na-atụ ụjọ bụ ndị nwere ikike maka nbudata njikọ ahụ ga-achọpụta ihe na-apụtaghị ìhè n'igosi ihe na-esonụ.
Inye aka na mpaghara archive maka ọtụtụ akụkụ na-enye ndị ahịa nyochaa akụkọ ahụ. Ntinye na njikọ a n'agbanyeghị nke a, ga-akpọrọ gị banye na amaokwu Google iji banye na ebe nchekwa ahụ. Ndị ahịa na-amaghị ihe ga-agụnye ID na ID na nzuzo na ịga n'ihu.
Ihe ịrịba ama a na ibe ya bụ oge nke abụọ nke esemokwu a na-ese foto. Ọ na-ewe ndị ahịa ka ha mara ihe niile na-egosi na ha bụ ndị na-akwụwa aka ọtọ na ịdị mma 'banye na Google'. Ndị na-amaghị ihe na-agụghị aha ha ga-agụnye ha accreditations na-amaghị na a na-eji amamihe ezigara ihe ndị ahụ na-ezighị ezi gaa na nchekwa data.
Nzọụkwụ site na ntụziaka iji mara ya
Ihe ọmụma dị mma nke a bụ URL na ibe. Ọ na-efunahụ "data.text / html.https ..." n'eziokwu dị ka blog na-ebupụta ya na-ekwu ozi URI ma ọ bụghị URL. Ihe 'URI' nke eji eme ihe dika akuku nke atumatu a bu ihe edere n'akwukwo ihe omuma.
N'okwu ahụ mgbe onye ahịa na-akụnye ihe ọ na-eche na ọ bụ njikọ na akụkọ nyochaa na email ahụ, ọ na-emepee akwụkwọ dị na taabụ ọzọ (ya na mbipute nke 'Banyere Google peeji nke') naanị na nke a bụ adịgboroja na-eziga ozi gị na onye omempụ ahụ.
Ihe omuma nke abuo iji weputa ihe ojo ozo a sitere na tweet gosiri dika ndia. Ọ na - ewetara, na ụzọ kachasị mma iji mata nke a bụ ma ị nwere ihuenyo siri ike nke ga - egosi na njikọ na nyochaa archive bụ foto efu (ebe ọ na - adịghị ọtụtụ) nke na - emepe akwụkwọ ahụ. Na ohere nke na ọ bụ njikọ zuru oke, ọ ga-abawanye n'ụzọ kwesịrị ekwesị, mana nke a bụ ihe dịka ndị ahịa abụọ ga-achọpụta na ọtụtụ ndị ga-enwe ohere dị ukwuu.
N'elu ohere ị na-achọ, blog na-akpọ ntị gaa na ị nwere ike ịga na haveibeenpwned.com ma lelee ya na email gị na saịtị a.
Ruo n'ókè ha aṅaa ka ojo a na-apụta?
Dị ka ọ dị site na mkpado blog site na WordFence CEO Mark Maunder, a gụwo ojoro ahụ n'ime izu ndị na-adịbeghị anya. Nsogbu dị ntakịrị na a gụwo ya maka ọ bụghị site na onye ahịa ahụ, kama ọ bụ ndị ọkachamara ma ọ bụ zutere ndị ahịa bụ ndị nyochara banyere ịda ya. Eziokwu ka a gwara, ọ dị ntakịrị ihe ọbụla Google nwere ike ime iji gbochie mwakpo dị otú a dịka ọkwa sitere n'aka Google:
"Anyị na-eche banyere mbipụta a ma na-anọgide na-ewusi mmegide anyị megide ya. Anyị na-enyere ndị ahịa ọta aka site na mwakpo phishing na ụzọ dị iche iche, gụnyere: nchọpụta nchịkwa nke mpempe akwụkwọ nke ozi phishing, Nchọpụta Nchọgharị Nchekwa nke na-enye ndị ahịa aka maka njikọ dị ize ndụ na ozi na mmemme, na-ezere ntinye aka na ntinye aka enyo, na mbara igwe bụ njedebe si n'ebe ahụ. Ndị ahịa nwere ike imepụta nkwenye abụọ maka nchekwa nchekwa. "
Kedu ka ị ga-esi chebe onwe gị pụọ n'ụdị ọgụ dị otú a?
Ọ bụrụ na ị chere na ị na-emechu ahụ, ihe kachasị mma ịme bụ ịgbanwe igodo nzuzo gị, nke a na-enye onye iro ahụ ka ọ dị ugbu a ghara idebe gị na ndekọ gị site n'ime otu ahụ site na njedebe ya. Ị nwere ike ịme ihe ndekọ maka ndekọ ndekọ ndekọ gị iji hụ ma onye ọzọ edebawo na ndekọ gị. Ị nwere ike ime nke a site na ịmepe akaụntụ Gmail na mgbe nke ahụ gasịrị, pịa Nkọwa.
Ọ bụrụ na enweghi mwakpo, ma chee na ị nwere ike ịbanye na njikọ dị otú ahụ na izu ndị a, ugbu a ugbu a ga-abụ oge dị mma iji gbanwee igodo nzuzo ahụ.
Ka Google na-eleba anya, ụzọ kachasị mma ị ga-esi bụrụ ihe ndabara ịdabere na ya, bụ inye ike nkwenye abụọ maọbụ nyocha maka nchekwa nchekwa ọzọ.
Site na ID nke onye ahịa ya na okwu nzuzo ya, onye na-enwusi ike nwere ike ime ihe ọ bụla ọ hụrụ n'anya na akwụkwọ akaebe. Ya mere, ọ na-eme nke ọma iji gbanwee okwu nzuzo Gmail gị ugbu a na mgbe ahụ ka ị nọrọ n'enweghị nsogbu.
Mpempe akwụkwọ Google End Drone, Nke a bụ Egwuregwu
Ihe 3 dị mkpa iji zere imefu ọrụ IT